Nzọụkwụ 20 Ntuziaka iji wụnye Gentoo | NwetaLeta | ChrisADR | Site na Linux
N'ikpeazụ! Ihe anyi nile na eche. Ogologo oge Ntuziaka ntuziaka Linux, nke m mere, na-ewere amaokwu sitere na Akwụkwọ ntuziaka Gentoo. Tupu m amalite iguta usoro ma hụ ma m nwere ike ịnapụta nkwa m ime ka ọ dị mfe, Achọrọ m ịkọwapụta ọtụtụ ihe.
Ntuziaka a dị mfe dịka o kwere mee
Anaghị m akụziri gị otu esi etinye NVIDIA ọkwọ ụgbọala ọhụụ, ma ọ bụ sistemụ nnwale ọhụụ ọhụụ sitere na ụlọ ọrụ ụfọdụ. Aga m agbali idebe ihe niile na obere, gịnị kpatara ya? dị mfe, yabụ m hapụrụ gị ihe ka inyocha wee mụta 😉
Aga m achikota n 'uzo di nfe nke m ga-aru oru n'ime ntuziaka a. Achọrọ m ịwụnye Gentoo na eriri iji kpuchie ihuenyo, mana ị nwere ike ịmeghachi ya na draịvụ ike gị ma soro m usoro ahụ. Nzọụkwụ ndị a bụ:
Ejiri arụ ọrụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere m ntakịrị site na akwụkwọ ntuziaka, mana ọ bụ n'ihi na ọ masịrị m itinye ihe niile n'otu ngwugwu iji nwee ike ịrụ ọrụ nhicha, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụsị iji nyochaa nhọrọ ndị ọzọ, egbula oge ịga na Akwụkwọ ntuziaka, a ga-enwe ozi niile ha chọrọ.
Maka ntinye a, m ga - eji SystemD na GNOME (M ga - akọwa mgbanwe ndị dị mkpa maka KDE n'ime ngalaba GNOME), mana maka ndị na - eme njem na OpenRC, ha ga - arụ ọrụ ụlọ ha 😉 Ahọrọ m SystemD ya mere ọtụtụ usoro ndị ọzọ ejirila ya. na ndị dị otua Ọ nwere ike ịmatakwu gị mgbe ị na-ahazi ihe ụfọdụ ka ị ga-enweta ahụmịhe na Gentoo. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido:
1 Echichi ọkara:
2 Kwadebe diski:
3 Oge 3:
8 Kporie 🙂
M na-ahapụ ebe a njikọ Site na ọkwa m gara aga na isiokwu a, ana m akwado iji distro nke nwere ọnọdụ eserese, ebe ọ bụ na ọ dị mfe iji nyochaa Akwụkwọ Ntuziaka n'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịmeghachi ihe niile mgbe ọ bụla. Aga m eme ya site na Gentoo m nke m ji ede ihe ndia.
Nzọụkwụ a na-abụkarị nke onwe, ọ bụ oge ọ bụla iji tụgharịa uche ma kwụsị ka ị hụ otu ịchọrọ ka nkebi gị kwụsị. Dịka anyị kwuru na anyị ga-eme ka ọ dị mfe, anyị agaghị eji LVM ma ọ bụ RAID, mana ọ dị mfe ma dị ọcha ext4 na nkebi anyị. M na-aga ịkpụzi eriri nke bụ ngwaọrụ / dev / sdbO doro anya na ị ga-etinye ya na mkpa gị.
Dịka ị pụrụ ịhụ na m na-eji fdisk n'ihi na m bu n'obi iji MBR maka sistemụ m, ọrụ ọzọ ga-edozi maka ndị chọrọ iji UEFI 😉
M ga-ekewap ihe atụ na nkebi ihe atụ home naanị ka ha nwee ike ịgbaso usoro kachasị mfe. / buut Aga m ahapụ ya na mgbọrọgwụ ndekọ n'ihi na dịka anyị kwurula, anyị ga-eme ka ọ dị mfe. (Anyị na-aga iwu 1)
Aga m ejedebe ihe owuwu yiri nke a:
anyi ga ejedebe w ide diski ahụ. Dabere na nkebi ndị ị mere na ụdị nke faịlụ faịlụ ị debere, anyị ga-emepụta ha mkf. Ihe dika nke a:
(Nke a ka m ga-agụta dị ka otu iwu n'ihi na ọ bụ ugboro ugboro 😉 (Anyị na-ama na-aga 2 nzọụkwụ).
Ugbu a, anyị ga-ebugo sistemu ọhụrụ anyị n'ime sistemụ nke dị ugbua. Maka nke a anyị na-eji ngwá ọrụ ahụ ugwu. (Emepụtara m / mnt / gentoo ndekọ, mana enwere ike ịhapụ ya) (Anyị bụ 3 nzọụkwụ ugbu a.)
Site na nke a anyị enweworị usoro maka usoro ọzọ.
The stage3 bụ mbadamba nkume nke ebudatara na peeji nke gọọmentị Gentoo, ị nwere ike ibudata ya na ihe nchọgharị gị ma ọ bụ site na njikwa ahụ, maka ihe bara uru m ga-eji otu nke m budata ma m ga-edebe ya n'ọnọdụ m riri elu sistemụ (/ mnt / gentoo). (Anyị na-aga 4 nzọụkwụ)
Naanị m chọrọ imesi ike ebe a na m na-ebudata a stage3 na systemd esịne. Nke ahụ na-echekwa m oge nkwụghachi ọtụtụ ebe ọ bụ na ọtụtụ mmemme abanyelarịrị usoro na profaịlụ na sistemụ. M wepụrụ nhọrọ v na tar ka ndepụta gitant nke data amịpụtara apụtaghị, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ya, ịnwere ike ịgbakwunye ya.
Ugbu a, anyị nọ n'akụkụ a nke Akwụkwọ Ntuziaka
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ otu ihe niile si emebe mgbe ị na-apịpụ naanị ịchọrọ iji ls na ndekọ na ị ga - enwe ihe dịka nke a:
Anyị agaala ọkara ọkara ebe ahụ, ugbu a anyị kwesịrị itinye obi anyị. Maka nke a ị nwere ike ịgụ akwụkwọ ntuziaka Gentoo, naanị m ga-eme mgbanwe ole na ole, m ga-egosi gị tupu na mgbe ị gachara ka ị wee hụ etu m siri gbanwee.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enweghị ọtụtụ ihe ị gbakwunye, ihe kachasị sie ike ịchọpụta bụ CPU_FLAGS_x86 enwere ike ịtọ ya mgbe nrụnye zuru ezu na mgbe were were na-arụ ọrụ ugbu a. Ka o sina dị, ọ dị mma ileba anya na Akwụkwọ Ntuziaka ma nyochaa njikọ ndị yiri ka ha nwere ozi ndị ọzọ. Na enyo ndepụta M na-ahapu ya ebe a ka o nwere ike. Naanị họrọ nke kacha mma maka gị. Ọzọkwa, ka anyị na-eme ka ọ dị mfe, anyị ga-agba mbọ ka anyị ghara ịgbanwe ọtụtụ ihe gabiga ókè.
Obere tweak ọzọ nke anyị ga - eme ozugbo echichi ahụ malitere bụ idetu adreesị nke ebe nchekwa anyị, anyị mezuru nke a site na iwu na - esonụ (Anyị na - aga ... nzọụkwụ 5, 6 na - agụta nke na - eso)
Ihe ọ na - eme bụ idetuo nhazi dị mkpa ka portage wee budata osisi mmemme, nke bụ nchịkọta ebuilds nke ga - enyere gị aka ịwụnye ngwugwu ọ bụla na Gentoo.
Na nke a anyị nwere nke kacha nta dị mkpa iji nwee ike ịmalite iji Gentoo na njikwa 🙂
Ugbu a anyị hụrụ onwe anyị na nke a Akwụkwọ NtuziakaKa anyị detuo DNS anyị ugbu a, ma melite njikọ dị n'etiti kernel na-agba ọsọ na gburugburu ebe obibi anyị dị na nkewa. Anyị ga-eme nke a na iwu ndị a
Okwesiri ighota na ufodu nkesa gha aghago usoro ole na ole, mana opekata mpe oge m gbaliri na nke a ezuola. Ọ bụrụ na ha nwere nsogbu, Akwụkwọ Ntuziaka nwere ike ịme ihe niile;). (Anyị na-aga dị ka ... iwu 12, mana nke a ga-abụ nzọụkwụ 7)
Ugbu a, anyị ga-abanye na nke ọhụrụ anyị ... Site na ebe a, anyị na-agba ọsọ sistemụ ọhụrụ site na njikwa 😀
Iwu ikpeazụ bụ nhọrọ, ọ na-agwa anyị na njedebe anyị nọ n'ime kroot na-agbanwe aha maka ọdịiche ka mma 🙂 (Anyị na-aga 8!)
Ihe mbụ anyị ga - eme na Gentoo ọhụrụ anyị bụ melite nchekwa, anyị nwere ike ime iwu a iputa-webrsync. Ọ dị mma maka ụfọdụ ịdọ aka ná ntị ịpụta, ọ bụ naanị na faịlụ ma ọ bụ ndekọ aha ndị na-adịghị adị tupu e kee ha.
Ugbu a, anyị ga-ahazi nkọwa ole na ole tupu imelite usoro ahụ (Aga m akọwa ihe kpatara m ji eme ya otu a na oge). Nke mbụ profaịlụ anyị, ọ bụrụ na ị hụla ọkwa m banyere make.conf, ị nwere ike ịchọpụta ntakịrị ihe m hapụrụ na profaịlụ, ugbu a bụ oge iji malite iwu desktọpụ anyị kachasị mma, nke mbụ anyị ga-enyocha profaịlụ anyị nwere ọrụ na esele:
Dịka anyị pụrụ ịhụ, anyị nwere profaịlụ na amd64 na sistemụ na ndabara (nke a bụ n'ihi nhọrọ anyị họọrọ ogbo 3 na peeji nke nbudata). Iji họrọ profaịlụ anyị nwere ike iji nọmba ma ọ bụ aha ahụ, m ga-etinye gnome na systemd mana ọ bụrụ na ịchọrọ kde ịkwesịrị ịhọrọ plasma. (Ọ bụrụ na ịchọrọ onye ọzọ, ịnwere ike ịhapụ ya na profaịlụ systemd. (Nke a bụ nzọụkwụ 10 😉)
Akara akara (*) na-egosi profaịlụ ahọrọ.
Ugbu a, anyị ga-ebudata mmemme ole na ole ga-enyere anyị aka ịmechaa nrụnye anyị nke ọma. M na-ede ha niile na otu iwu iji chekwaa nọmba ebe m na-eru nso 20 😛 mana echegbula, m ga-akọwa ha niile:
Ọfọn, nke a bụ ndepụta nke mmemme m na-etinye (ndepụta dị na ihuenyo ka ukwuu n'ihi ịdabere na ya):
gentoo-kafofin: Anyị isi iyi koodu setịpụrụ iji wụnye kernel na nzọụkwụ ọzọ.
Linux-femụwe: Ọtụtụ ọkwọ ụgbọala dị mkpa maka kọmputa dị iche iche (ọkwọ ụgbọala wifi m dị na ndepụta a dịka ọmụmaatụ)
genkernel-na-esote: Ngwá ọrụ nke ezubere iji kwado usoro mkpokọta kernel na ihe okike (ihe mgbagwoju anya nke gbanahụ post a, mana ọ dị mkpa iji gbaa ọsọ)
gentoolkit: Otu ngwa ọrụ nke Gentoo nke na-ekwe ka njikwa nke sistemụ ka mma.
buut: buut manager, dị ezigbo mkpa na-enwe ike ịmalite iji anyị usoro.
vim: Ọ dị m mma na nano (nke bụ nke na-abịa na ndabara 😛).
Dabere na njikọ internetntanetị na ikike nke processor, nke a nwere ike iwe ogologo oge. Were oge a dị ka akwụkwọ maka usoro ndị ọzọ. (Ugbu a anyị bụ 11: O, fodụrụ ntakịrị ...)
Ugbu a, anyị ga-eme obere nhazi n'ime sistemụ:
Ngwa ngwa ịza ajụjụ ndị a iji:
Anyị na-ewepụta oge oge anyị. Ọ na-abịa n'ụdị zoneinfo / / . Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ obodo na mpaghara gị ị nwere ike inye a ls na ndekọ.
Mepụta ogige anyị. Gentoo na-abịa na ndabara na mpaghara ole na ole, a na-atụ aro ya mgbe niile iji UTF-8 na ihe anyị na-eme bụ ịgbakwunye nke si mba anyị na ndepụta ma mepụta ndị niile nọ na ndepụta ahụ. N'okwu m etinyego m naanị otu ka ị hụ otu esi eme ya.
Etinye anyị kpọrọ aha, aha ọ bụla ezuola n'ebe a 😉
Maka ndị kachasị achọ… ugbu a anyị kwụpụ 12 🙂 ọ fọrọ obere.
Ugbu a, anyị ga-ewepụta faịlụ ahụ fstab, maka ndị na-amaghị iji ya, wee gụọ na ịntanetị 😉 mana iji nye gị echiche zuru oke, ọ bụ faịlụ a na-agụ n'oge ịmalite usoro nke na-enye ohere itinye akụkụ niile na isi ihe nke. sistemụ. Maka ugbu a, anyị ga-ahapụ ya na ụkpụrụ nke nkebi anyị.
Dika anyi huru, a na m etinye diski nke m tinye Gentoo. Eleghị anya ị ga-eji aha ndị ọzọ (sda) na ọnụọgụ nhọrọ na ụdị ha chọrọ. (Nzọụkwụ 13)
Ugbu a, anyị ga-etinye paswọọdụ nke onye ọrụ anyị.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ, nke a bụ oge dị mma iji mepụta onye ọrụ anyị ma ọ bụ na anyị nwere ike ime ya ma emechaa, mana cheta itinye ugwu gị home ya na nke kwekọrọ na ya. (A pụrụ ịgụta usoro ndị a dị ka nọmba 14)
Oge a ana m etinye igodo ule, mana echefula ichedo aha njirimara gị nke ọma mgbọrọgwụ na ndị ọzọ. ???
Ugbu a anyị emechaala usoro niile gara aga, oge nke eziokwu ...
Mkpụrụ ndụ anyị ga-abụ oge ntụgharị uche na ịgụ akwụkwọ, ana m akwado ịleba anya na akwụkwọ akwụkwọ Gentoo n'okwu ahụ, ọkachasị m ga-ewe ọtụtụ nseta ihuenyo nke akụkụ ole na ole dị mkpa, ka anyị gaa n'ihu:
Site na nke a anyị nwere ike ịmalite usoro nhazi, nke maka sistemụ chọrọ nkọwa ole na ole m ga-egosi n'okpuru.
Cheta na ụzọ ahụ gosipụtara n’elu (akara nke abụọ na-acha anụnụ anụnụ). Ọ dị mkpa ịnwe ma usoro init dị ka iwu ya mere o dika [*].
Modfọdụ modulu dị mkpa iji nwee ike ịrụ ọrụ na WiFi. Maka na ugbua anyị niile na eji wifi 🙂 cfg 80211, Mac80211.
Dịka ị pụrụ ịhụ, kaadị netwọk Wi-Fi m bụ Intel 🙂 ihe ọ bụla anaghị arụ ọrụ maka m, ọbụlagodi na laptọọpụ m ugbu a. Onye ọ bụla ga-eji ihe kacha dịrị ha mma. Cheta na lspci na lsusb bu ndi enyi 😉
Ozugbo nhazi ahụ gwụchara, anyị na-echekwa faịlụ ahụ na aha ndabara ma pụọ ​​na menu. Ugbu a ọ ga - amalite ịchịkọta kernel anyị, modul ya na initramfs ga - eme iji malite na sistemụ emechaa.
Ozugbo emechara ya, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla kpatara ịdọ aka ná ntị na njedebe nke mkpokọta ahụ, cheta na ị nwere ike ịmeghachi usoro ahụ ọzọ. A na-echekwa nhazi ahụ ka ị nwere ike ịchọ naanị nhọrọ ndị ga - egosi na elu CASE iji «/»Ma gbanwee ụkpụrụ ndị a tụrụ aro. (Nke a bụ nzọụkwụ anyị 15)
Ozugbo arụnyere kernel ọhụrụ anyị, ọ bụ oge ịgwa ndị na-enweghị ike ime ihe iji kwado usoro a. Dị ka ị pụrụ ịhụ na foto gara aga enwere obere paragraf nke ỊDỌ AKA NA NTỊ, ọ na-agwa anyị na sistemu anyị nwere sistemụ faịlụ ndị ọzọ na-abụghị ext2. Nke a, na otu nkọwa zuru ezu, anyị ga-ahazi ya na ntigbu anyị tupu ịwụnye ya. Na Njikwa / wdg / ndabara anyị na-eme mgbanwe ndị a:
Site na nke a anyị na-agwa grub ịkwadebe maka iji wee malite usoro ext4 na mgbọrọgwụ anyị ( / ) ma mee ka sistemu bido na sistemu kama imeghe OpenRC. Ugbu a, anyị nwere ike iwunye grub na diski 🙂 (usoro 16 na 17 ruo ugbu a 😉)
Ugbu a, anyị ga-emelite usoro ahụ kpamkpam. Nhọrọ a nwere ike iwe obere oge dabere na profaịlụ ahọrọ na ọnụọgụ nchịkọta ndị chọrọ ka a zigharịa. Dị ka ogbo 3 A na-eme ha site n'oge ruo n'oge, ọ ga-ekwe omume na nchịkọta ole na ole kwesịrị imelite ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ na otu (nke kwesịrị ịdị ka ọ dị ugbu a). nwoke pụta 😉 I chere na m ga-ahapụ ihe ọ bụla kpam kpam na-ata ata iji detuo na mado? 🙂
Njikere, anyị fọrọ nke nta ka ebumnuche 🙂 ugbu a naanị anyị chọrọ gburugburu desktọọpụ anyị, na nke a ị nwere ike iji gnome m, ma ọ bụ họrọ plasma, ma ọ bụ nke kachasị gị mma best Usoro a ga-adị ogologo, yabụ m Kwadoro ịhapụ igwe na-agba ọsọ n'abalị, yabụ mgbe ha tetara, ha nwere ike ịmalite iji sistemụ ha 😉 (Nzọụkwụ… 18 nke gara aga na ugbu a 19)
Ugbu a usoro abịa na agaghị m enwe ike ijikwa 100% yana nke ọ nwere ike ịbụ na njehie ga-apụta. Ebe ọ bụ na ngwungwu ngwugwu ahụ buru ibu, enwere ike nwee esemokwu na ọkọlọtọ jiri, yabụ aga m egosi gị otu esi edozi ha 😉
Jiri iwu a iputa -av anyị na-arịọ portage gbakọọ niile dependencies, na anyị ga-eleghị anya ejedebe na ihe dị ka nke a na ọgwụgwụ.
Anyị na-asọ Mba. Iji nweta echiche nke ihe merenụ. Anyị nwere ogbo 3 nke biara jikọtara ọkọlọtọ eji USE iche iche, cheta? Ugbu a na anyị agbanweela profaịlụ, anyị agbanweela ọkọlọtọ eji eji ndabara. na ugbu a portage na-agwa anyị na e nwere iji ọkọlọtọ na ọ kwesịrị ka nwere iji kpokọta ndepụta nke mmemme na anyị jụrụ (m bụrụ gnome).
Iji dozie nsogbu ndị a anyị na-aga ịmepụta otu faịlụ na aha nke usoro ihe omume (na-enwe ike ịchọta ya mgbe e mesịrị mfe) n'ime nchekwa /etc/portage/package.use. (Ọ bụrụ na folda ahụ adịghị, ha nwere ike iji aha ya kee ya)
Dịka na ndepụta m enwere m abụọ, aga m eme ya dị ka ndị a:
Na nke a anyị nwere ihe niile dị njikere ịnwale ọzọ 🙂 mana tupu nke a, Achọrọ m ịkọwapụta na m na-etinye aha njirimara nke mmemme ahụ na mbido, mgbe ejiri USE flags, ha nwere ike ịbụ 1 ma ọ bụ karịa, (-) site n'ihu na-ekwu ihe gbanyụọ na akara ọ bụla na-amalite site na # na-eleghara anya site na ndozi. Mfe ziri ezi? Nke a bụ anwansi nke omenaala Gentoo. Mana m ga-ahapụ ọrụ ahụ na nnabata maka ọkwa ọzọ n'ihi na nke a adịla ogologo oge Step (Nzọụkwụ 20, nchọpụta nsogbu 🙂)
Ka anyi nwaa ịwụnye iwu ọzọ:
Dị ka o doro anya, anyị agwụchabeghị nzọụkwụ 20 nke ọma 😛 ma ugbu a, anyị na-eche njehie ọhụrụ 2 ihu nke yiri nnukwu ohere iji gaa n'ihu ịkọwa ntakịrị ihe ngosi 😉
na Isi okwu bụ aha mmado nke mmemme nwere nke na-egosi ụdị ụlọ na n'okpuru ọkwa ọ kwadoro. N'okwu a "~ Ugochukwu bu ngalaba "adighi kwusi" nke amd64. OpenSSL bụ mmemme na-abịa mgbe niile na mmelite ọzọ ma ọ bụ ọzọ (ọ dị ezigbo mkpa idobe ya emelitere yana enweghị nsogbu) yabụ ọ kachasị mma iji ụdị "anaghị akwụsi ike". Site na ndabara na laptọọpụ profaịlụ na-akwado «amd64 "ma ọ bụ" x86«. Iji gbanwee nke a, ịkwesịrị ịgbakwunye mgbanwe ahụ ACCEPT_KEYWORDS = »~ amd64 ″ /» ~ x86 ″ n'ime make.conf (dika m kwuru na m ga-eme ka post ahụ dị mfe, anaghị m emetụ ya aka karịa nke a).
Ugbu a maka anyị, dịka na nke gara aga, ọ dị mkpa ịmepụta folda ahụ ngwugwu.accept_keywords en / wdg / portage ma tinye otu ụdị mana jiri KEYWORD agbanwe agbanwe anyị ga-eji.
Ha niile bụ ọkachamara na were were Ugbu a, anyị ga - edozi nsogbu ikpeazụ anyị ahụla… mgbanwe na ikpuchi. Ọ bụrụ n’ịtụletụ anya, ị ga - ahụ ihe m na - egosi gị n’onyo a ma mara na ọ dị mfe.
Ekwesiri ighota na na faịlụ a, odi nkpa ide n'ụzọ doro anya mbipute nke anyị ga-eji. N'elu ọ bụ nhọrọ ma ọ bụ ịnwere ike ịmalite site na «> = ụdị / ngwugwu-mbipute »Tellgwa ndozi iji gbanwee mgbanwe site na ụdị ahụ. Ka anyi chegharia iwu insalation 🙂
Anaghị m enweta ọtụtụ njehie mgbe ịwụnye mana ọ dị mma ịnwe ike ikpuchi ụdị ihe omume niile nwere ike ibilite, hahaha 🙂 ka anyị lelee ihe pụtara n'ihu m:
Lee portage na-agwa m na m nwere otutu nsụgharị nke otu usoro ihe omume na ha nọ na esemokwu, cheta gentoolkit? Anyị wụnyere ya na ihe mmemme anyị ndị ọzọ na nso nso a. Anyị ga-eji otu n'ime iwu gị eshowkw iji hụtụ ntakịrị ihe anyị nwere ugbu a.
Dịka anyị pụrụ ịhụ, anyị nwere ụdị nke openssl arụnyere, oghere 0, na anyị chọrọ ịwụnye nke nwere [M] nke bụ oghere 0 / 1.1 ... na / na-egosi na ọ bụ otu ma ọ bụ nke ọzọ, ma ọ bụghị ha abụọ ọnụ.
Dịka anyị ga-emelite mmemme niile ahụ, ka anyị buru ụzọ wepu oghere 0 iji nwee ike imelite dị mfe.
Dịka anyị nwere ike ịhụ, a ga-enwe ụlọ akwụkwọ ole na ole n'ime usoro a n'ihi na naanị anyị ehichapụla arụmọrụ, iji kpochapụ ọbá akwụkwọ anyị ga-ejikwa iwu ọzọ, mana ugbu a, anyị ga-ahapụ ya dị ka ọ dị is
Ka anyi nwalee gnome anyi ozo 🙂
Niile dị njikere! Na n'amaghị ama, anyị na-ekpuchikwa otu nsogbu nke nsogbu ị nwere ike ịnwe mgbe ị na-etinye 🙂
Ugbu a, anyị ga-ahapụ ya ka ịwụnye abalị niile, ọ bụ ihe ị nwere ike ịhụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nbudata 1 GB 🙂
Ntinye Grub mara mma grub-wụnye / dev /
Ọ bụ naanị uru banyere na ha ga-edo anya na ọ bụ ngwaọrụ zuru ezu na abụghị nkebi. Itinye ya na nkebi nwere ike ime ka ihe ọ bụla ghara ịrụ ọrụ ma emechaa. Dị ka ebe ọzọ, ị nwere ike ibudata os-prober inwe ike ịchọ sistemụ arụmọrụ na diski ndị ọzọ. Iwu m gosipụtara nwere ntụpọ ole na ole ka m na-agba ya na USB ma ọ kwesịrị ịdị na draịvụ ike, mana ị gaghị enweta njehie ọ bụla.
Ugbu a cheta usoro ntọala grub site n'oge na-adịbeghị anya? Ugbu a ọ bịara inyere anyị aka. Anyị kwesịrị ịmepụta nhazi nhazi anyị ka ọ bụrụ akpụkpọ ụkwụ nwere sistemụ ma jiri Ext4 dị ka mgbọrọgwụ nkebi.
Emela 🙂 ugbu a, anyị ejirila aka ike kwadebe ma dịkwa njikere ịmalite oge ọzọ anyị ga-agbanye akụrụngwa. (Anyị mechara nzọụkwụ 21)
Nke ikpeazụ bụ naanị nkọwa zuru oke 🙂 anyị ga-arụ ọrụ anyị iji nwee ike ịbanye n'ọnọdụ ọhụụ oge ọzọ. Ọzọkwa ọrụ NetworkManager nwere ịntanetị anyị 😉
Ọfọn, anyị eruola njedebe ma echere m na m gafere naanị otu nzọụkwụ 😛, ọ bụrụ na ịnweghị ngwaike ọkwọ ụgbọala dị mgbagwoju anya, ọ bụrụ na ịgbaso aka a na Akwụkwọ ntuziaka, ọ bụrụ na ị nwee ike idozi nsogbu gị ụzọ… Ọ…G! Are bụ otu n'ime ihe ùgwù ndị nwere ahụmahụ Gentoo na nke kacha mma 🙂
Ugbu a ihe m dere karịrị akarị, n'ezie nkọwa ga - amalite ịpụta na m ga - etinye n'ọdịnihu mbipụta nke nkuzi, mana enwere m olile anya na ọ ga - enyere gị aka ịmalite usoro ntinye a 🙂 M ga - anọ ruo mgbe esote oge na post ọzọ na - enyere gị aka ịnụ ụtọ ihe banyere Gentoo na nhazi ya. O doro anya na m ga-amalite ide isiokwu ndị ọzọ m nwere mmasị na ya 🙂 Git na Kernel bụ ọrụ nke m na-emekọ ihe (enwere ndị ọzọ) ma ọ bụ na m chọrọ ime ya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ, enwere m ike ịgwa gị ntakịrị usoro 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Nzọụkwụ 20 Ntuziaka iji wụnye Gentoo
Ebel Sendon. dijo
Emechara m tinye Gentoo na VM, meekwa ntuziaka "ngwa ngwa" na akwụkwọ ndetu, mana ọ nwere usoro 26, ugbu a ana m anwale nkwụsi ike ya na karịa ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na m nwere sọftụwia niile m na-eji ugbu a na Debian. ọ bụrụ na ihe niile na-arụ ọrụ, aga m ejide akwụkwọ ndetu ma wụnye ya na PC anụ ahụ.
PS: Ọ nwere aha siri ike, mana ị nwere ike ịhụ na ihe ha na-ekwu na ha etinyeghị Debian 2 na enweghị njikọ ịntanetị (nke siri ike)
Zaghachi Abel Sendon.
Nnukwu Abel 🙂 nke ahụ bụ ezigbo ezigbo agwa 😉
Ikwuru eziokwu, ọ bụ aha ọjọọ emepụtara, ọ bụghị ogologo oge gara aga usoro a bụ ihe okike kachasị maka ndị ọrụ Linux, mana iji oge na akpaaka amatala ọchịchọ ịmata ihe. Gentoo anaghị anwa izobe ihe bụ isi nke Linux, na ntụle 🙂 ọ na-emikpu gị n'ime ya ka ị nwee ike ịmụ ọtụtụ ihe na-agbanahụ ọhụụ n'ebe ọzọ. Cheers
Ezigbo nkuzi, ngwụsị izu m na-anwale ya kemgbe m wepụsịrị ubuntu ebe ọ bụ na mụ na ya nọtụ, ọ naghị ekwenye m, ma ọ bụ m gbanwee Debian. Amabeghị m ihe kpatara Gnome ji ekwenyeghị m, enwere m ike iji Unity n'ihi oghere ihuenyo.
Eji m n'aka na ọ ga-abụ ahụmịhe ọhụụ 😉 Jisie na olile anya na ịmasị Gentoo 😀 Banyere
Youkwesighi ịwụnye xorg-sava ma hazie ya ihe tupu ị gnome?
Ndewo Fernan 🙂 ọ dịghị mkpa ọ bụrụ na ị ga-aga maka desktọọpụ dịka gnome ma ọ bụ plasma, n'ihi na ọ bụrụ na ị hazie VIDEO_CARD gị na make.conf nke ọma, ihe eji eme ihe na-elekọta ịwụnye ihe niile ịchọrọ iji banye na GNOME ma ọ bụ PLASMA n'enweghị nsogbu. . Na njedebe ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe gburugburu desktọọpụ, ị nwere ike ịhọrọ ọzọ, ma ọ bụ hazie X site na ncha site na ebe ahụ dịka ọ na-eme na nkesa ọ bụla ọzọ 😉
Ọ na - eme na nnukwu desktọọpụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na - eji desktọọpụ zuru ezu, na gnome enwere ọtụtụ ihe m wepụrụ na distro m, manjaro, m wepụrụ ọtụtụ gnome ọzọ, yabụ agụrụ m na gentoo ọtụtụ ga-etinye gnome-light na wee tinye ya ihe, dị mma karịa iwepu ha na ndị ọzọ na nkesa na ọ fọrọ nke nta ka ihe niile chịkọtara.
Echere m na na gentoo ihe dị iche na ọsọ na kọmputa dị ike ga-enwe ekele karị, na kọmputa 2-isi ọ ga-arụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ngwa ngwa debian n'ihi na ha abụghị kọmpụta dị ike, na kọmputa nwere nhazi ka mma ọ ga - eme dị ka ọnụọgụ abụọ na-ekesa maka kọmputa nke na-esighi ike ma ọ bụrụ na a ga - enwe ọdịiche.
Ọ bụ eziokwu 🙂 GNOME n'onwe ya dị arọ nke ukwuu, mana ọ bụrụ na ị gbasoro ụfọdụ n'ime isiokwu ndị a, ọ dị mkpa ịkọwa na gnome n'onwe ya nwere nchịkọta nke ọkọlọtọ USE nke na-enye gị ohere izere ịchịkọta ụfọdụ ihe. Gnome base, dịka ọmụmaatụ, enwere m ya na-enweghị egwuregwu, ndetu na ọtụtụ ihe m na-ejighi 🙂 ma enwekwara gnome-extra nke nwekwara ndepụta nke ngwugwu ndị ọzọ 🙂 (Echere m na ihe ọkụ ọkụ-ntakịrị bụ ntakịrị Ochie, n'ihi na enweghị m ike ịchọta ebe ọ bụla na nke ahụ ...) N'ezie, GNOME adịghị 100% dị na OpenRC ya mere ọ nwere ntụkwasị obi na SystemD ... yana dịka m kwuru na m ga-eme ka ọ dị mfe, ịwụnye gburugburu desktọọpụ zuru ezu dị mfe karịa nhazi nke chọrọ obere ihe. Aga m ahapụ nke ahụ maka ọkwa ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ, ma ọ bụrụ na enwere m obere oge iji nwalee ihe kpatara na anaghị m eji ha 🙂
Ọfọn, enweghị m ike ikwenye data ahụ, enwebeghị m ohere ịchịkọta na kọmputa ochie iji kwuo nke ahụ. Ma mgbe m chịkọtara ya na VM (ya na otu isi dị) oge ahụ abụghị nke ukwuu, o doro anya na ọ karịrị karịa -j9 mana ọ gaghị anwụ nke ike ọgwụgwụ ma ọ bụrụ na ị hapụ ya ka ọ na-arụ ọrụ n'abali
John obere Bad dijo
Kedu otu esi kwụsie ike na nsogbu nke mmelite na ịdabere. Enwere m obere laptọọpụ isi dịtụ. Ọ ga-adị mma ma wụnye gentoo na ya iji rụọ ọrụ na mmemme mmemme ọdịyo.
Zaghachi John obere blu
Well, Gentoo kwụsiri ike dika ichoro. Amaara m ndị mmadụ na-arụ ọrụ na usoro ahụ na-enweghị mmelite ruo ọtụtụ afọ, ọ na-arụkwa ọrụ dịka ụbọchị mbụ. E nwekwara ndị ọzọ na-emelite kwa awa 2 ọ bụla, ma ha na-eme nke ọma. Mgbe ọ na-egosi, ị nwere ike chọọ ọkacha mmasị gị na-egosi na https://packages.gentoo.org/ ọ dịghị mkpa ka ịwụnye. Site na nke a enwere ike ị nweta ezigbo echiche.
Gnome-light nọ n'ọdụ ụgbọ mmiri, a na m enyocha ya na igwe na-ahụ maka m nwere sabayon, nke na mgbakwunye na entrophy nwere oghere.
Na funtoo enwere gnome na openRC, distro a enweghị usoro, mana echere m na na nsụgharị ochie, enwere gnome overlays na openRC, dentrell overlay m chere na a na-akpọ, na ahụrụ m ya na gentoo wiki.
Hi Fernan, enyochala m ozi gị. Banyere gnome-light, ebuild bụ meta-ngwugwu, yana dịka ị na-ekwu, site ebe ahụ ị nwere ike iwunye obere ụdị nke GNOME, ọ bara uru ịkọwa na nke a bụ maka ụdị a na sistemụ. RCdị dakọtara na OpenRC dabere na GNOME 2 ma ọ bughi oge dị ka GNOME 3, dịkwa na portage na-enweghị mkpa mkpuchi. Daalụ maka ịkekọrịta nkọwa ndị a enwere ike ịfefe m na ọkwa niile 🙂 Greetings
Ngwanu, a gha m ihiwe echichi ruo mgbe m rutere ebe ahu, o ga abu maka na amalitere m ibi ndu na uefi ???
akara m enweghi ike inweta efi directory nimodo ibido na 00000 mana site echi
Echeghị m na ọ dị mkpa ịmalite ihe niile site na ncha, ọ bụrụhaala na boot / boot gị nwere sistemụ faịlụ abụba, ị nwere ike ịmalite n'oge ahụ.
M na-ahapụrụ gị wiki banyere UEFI, edere nke ọma na Spanish 😉
Kedu otu ngwugwu ma ọ bụ ojiji na-eme ka ndọtị ihuenyo na gnome na-eso ihe nkedo na libreoffice ọkachasị Onye edemede?
M na-akọwa ihe:
N'ihi nsogbu m na-ahụ anya, m na-eji gnome eme ihe na ntanetị, na manjaro ebe ọ bụ na nsụgharị 5.1 nke libreoffice ka mmelite nke nnweta pụtara n'ihu ruo mgbe ahụ na magnifier gbasaa ihe niile mana ọ bụrụ na ị dere na ederede, enweghị usoro cursor, ebe ụdị 5.1 nke Mgbe dee libreoffice, ihe nkedo na-agabiga ihe ị huru ebe ị na-ede na-adighi imeghari òké. Agbalịrị m dịka ọmụmaatụ debian 9.2 gnome na ndụ m na kọmpụta m na ederede na onye na-agbasawanye na-eso cursor, yabụ na ọ bụghị ihe nhazi nke folda nkeonwe mana ngwugwu na-enyere enyemaka a, na debian cinnamon enwere ihuenyo expander ma ọ dịghị eso cursor na libreoffice n'ihi ya, ọ bụ a gnome ihe, Otú ọ dị m gbalịrị sabayon gnome, ewepụtara gentoo ma ọnụọgụ abụọ, ma ọ dịghị cursor nsuso otú m ghọtara na ihe na-efu ya mere na ọ dịghị nwere nke a ọrụ.
Ikwu eziokwu na anaghi m eji libreoffice eme ihe, mana o bu ezigbo ajuju, echere m na igara
Universal Access> ịdị ukwuu> na ọnọdụ nke magnifier họrọ Soro cursor na òké.
M nwalere ya na m Evolution, na n'ezie mgbe m na-ede ihuenyo na-akpali yana ederede, nke a anaghị eme ma ọ bụrụ na nhọrọ "Akụkụ ihuenyo" ka nọ n'ọrụ.
Olileanya na ọ na-enyere na-agwa m otú o si gaa 🙂
Ndewo, mgbe m nwara 5, ịwụnye gentoo m ghọtara ihe gbasara akụkụ na ihe; Enwere m draịvụ ike na - akwụghị ụgwọ ọ bụla ma ka anyị rụọ ọrụ gentoo dị oke mma ma hazie nke ọma na mkpokọta anaghị adị ebighi ebi, ihe bụ na ị ga - ebugo ya gaa na bits anaghị eji genkernel n'ihi na n'ọkwa mara mma anaghị m dị ka ọhụhụ ahụ nke mere na m chịkọtara kernel ọnya ma recompi ọtụtụ oge, ugbu a, m na-arapara bụ na-arịgo ncheta mpụga na ụzọ akpaka na ịgaghị eme ya aka site na ịme "ugwu / dev / sd * / mnt "na nke ọma ihe nke enweghị mgbe faịlụ ndakọrịta na ihe ndị ọzọ, n'ihi na m na nke a ga-abụ distro ịkụziri ndị mmadụ iji na na ihe dị mfe karịa okodu a otutu oge na-achịkọta site na isi mmalite
Ọ bụ ezie na post a nwere oge ya, ọ na-eje ozi dịka ntụnye. M na a Linux ọrụ ugbu a…. Anaghị m echeta, 15, 20 afọ? Amalitere m na Slackware, gbanwere SuSE, Debian na Arch maka afọ 5 ma ọ bụ 6 ugbu a. (Ana m ekwu nke a ka i wee doo anya na m "na-agbachitere onwe m" na Linux)
A na-adọta m mgbe niile na Gentoo, mana n'etiti eziokwu ahụ na enweghị m oge na na m na-enwetakwu "umengwụ" na afọ, echeghị m echiche ịwụnye ya. M na-eji Thinkpadpad T420 na Arch mgbe niile ma ugbu a, m zụtara laptọọpụ nke abụọ, T440p nke ee ma ọ bụ ee, aga m etinye Gentoo.
Mgbe mmeghe a dị mkpirikpi, ajụjụ m bụ ebe m ga-esi nweta ozi gbasara ojiji na ọkọlọtọ faịlụ maka laptọọpụ m?
Ihe m chọtara bụ ozi zuru oke, ezigbo ntọala, mana amaghị m ma ọ dị mma maka laptọọpụ m yana maka nke m na-enye ya.
M na-arụ ọrụ na i3wm, enweghị Gnome, enweghị Kde, ọ dịghị DE ọzọ.
Ntinye ahụ adịghị mgbagwoju anya nye m, ihe na-esiri ike ịchọta bụ ozi banyere otu esi "akụ" usoro na kernel.
Daalụ maka ịgụ ma ọ bụrụ na m nwere ihe ịga nke ọma na ịwụnye Gentoo na T440p, m ga-eme ntuziaka zuru ezu.
My mbụ PR (Nweta arịrịọ) na Github
Etu esi azụta elekere sekit na $ 2 na JLCPCB?